Immisa kombiyuutar ayaan ku rakibi karaa alaabtaada? - DataNumen
Haddii aad iibsato hal shati, markaa waxaad ku rakibi kartaa badeecadeena hal kombiyuutar oo keliya. Fadlan ogow INAADAN u wareejin karin rukhsadda hal kombiyuutar mid kale, haddii aan kombiyuutarkii hore mustaqbalka dambe loo isticmaali doonin hadda ka dib (waa laga tegi doonaa).
Haddii aad rabto inaad ku rakibto badeecadeena kumbuyuutarro badan, waxaad leedahay 3-da xulasho ee soo socda:
Iibsiga tirada liisanka iyadoo lagu saleynayo tirada kumbuyuutarrada aad rabto inaad rakibto. Waxaan kuu soo bandhigeynaa qiimo dhimis mug leh haddii aad iibsato shatiyo badan isku mar.
Iibso liisanka goobta si aad ugu rakibto barnaamijkeenna kombiyuutarada tiro aan xadidneyn ururkaaga.
Haddii aad farsamo yaqaan tahay, oo aad rabto inaad ruqsadda ka wareejiso hal kombiyuutar oo aad u wareejiso mid kale si xor ah, markaa waad iibsan kartaa liisanka farsamo yaqaan kaasoo kuu oggolaanaya inaad sidaas sameyso.
Doono si xor ah nala soo xiriir haddii aad xiisaynayso inaad iibsato liisanka goobta ama liisanka farsamo yaqaan.
meeqa kumbuyuutar, kombiyuutarro badan, hal kombiyuutar, liisanka goobta, liisanka farsamada, liisanka wareejinta
Shatigu ma yahay mid waara?Ma ka wareejin karaa liisanka hal kombuyuutar mid kale?